दिनहुँ १० पटक वारिपारि
एक महिला भारी बोकेर खोला तरिन् । एकछिनपछि फर्किएर खेततिर हराइन् । फेरि पोका बोकेर खोलामा छिरिन् । तराई–मधेसको प्रचण्ड गर्मी र खोलामा पानीको सतह घटबढ भई राख्ने वर्षायाममा उनको हिम्मत एवं जाँगर देख्ने जो कोही पनि आश्चर्य मान्छन् ।
पुरुषको दाह्रीकपाल काट्दै महिला
एक महिला दाह्रीकपाल काटिरहेकी छन् । पालो कुरेर लहरै पुरुष बसिरहेका छन् । यो दृश्य कुनै महानगर वा नगरमा नभएर मधेसी, दलित एवं आदिवासी बहुल मोरङको जहदा गाउँपालिकाको हो ।
पारी शीतल, वारी हपहप
‘आहा, यहाँ सरर हावा, अनि कति शीतल !’ बिहानको डुलाइमा सिंघिया पुल पार गरे लगतै विराटनगरका डा. प्रियेश आचार्यले भने । उनले हिंडाइको थकान हराएर स्फूर्ति महसुस भएको बताए । आकाशमा बादल मडारिए पनि पुल वारी महानगरको सहरी क्षेत्रमा हिंडनै मुस्किल हुने गरी हपहप थियो भने पारी मोरङकै कटहरी गाउँपालिकाको सानासाना घर भएको चौधरी बहुल महेसपुर बस्तीमा शीतल थियो ।
चिकित्सकले कुनै पनि परीक्षण लेखेमा मञ्जुदेवी गोइतको छनोटमा विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालकै प्रयोगशाला पर्छ । कम शुल्क, बढी सुविधा, सहज पहुँच र छरितो सेवाका कारणले आफू एवं छरछिमेक यहाँ आउने गरेको उनले बताइन् ।
संसद्मा सत्तापक्षमा कम्युनिस्ट र विपक्षमा कांग्रेस छ । तर सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा यी दुवै दल एकै कित्तामा उभिएका छन् । विकासमा हातेमालो गरिरहेका छन् ।
कार्यालयभित्र फास्ट ट्रयाक टोली
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भन्न बितिकै पैसा खुवाएपछि मात्र काम गरिदिने थलो भनेर बुझ्छौं तर बदलिँदो परिवेशमा धेरै परिवर्तन भएको छ । अघिल्लो वर्षदेखि अनलाइन फारम सुरु भएको छ । सामान्य लेखपढ गर्न जानेका सेवाग्राहीले समेत आफैंले ती फारम भरेर सरकारको निर्धारित शुल्क तिरी जग्गा किनबेच गर्न सक्छन् ।
जहाँ नेवार बोल्छन् थारू र मैथिली
पराल र जस्तापाताले छाएका ससाना घर छन् । स्थानीयको हुलिया, पहिरन र बोली हेर्दा–सुन्दा आगन्तुकलाई सबै थारू र तराईवासी मधेसी मुलकै मात्र होलान् जस्तो लाग्छ । सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–६, चिमडीको खोरिया टोलमा नेवार समुदायको पनि बसोबास छ, जो धाराप्रवाह स्थानीय भाषा बोल्छन् ।
मिहिनेतले आउँछ हिम्मत
पाँच वर्षअघि पुनमदेवी सिंहले आफ्नो श्रीमान रामचन्द्रलाई गुमाइन । मोरंगको कटहरी–४ की उनको एक्लो काँधमा दुई छोरी र एक छोराको अभिभारा आइ पर्यो । मलबिउको पसल र एक सहकारीको उनले बागडोर सम्हालिन् । पुनमले दिनरातको मिहिनेत, समर्पण र कौशलले व्यापारलाई उकासिन् ।
भूमिगत जलस्तर किन घट्दै छ ?
अठासी वर्षीय वातावरणविद् तोरेन्द्रमान सिंह प्रधानलाई आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा तराई मधेसमा घट्दै गएको भूमिगत जलस्तरको चिन्ता छ । अचेल उनी ‘समय अनुकुल वर्षाका लागि विरुवा रोपौं, भूमिगत जलस्रोत बचाऔं,’भन्ने नाराका साथ सचेतना फैलाउदै हिंडेका छन् ।
पुर्खाको चिनो इनार
घरको छेवैमा झन्डै १५ धुर जग्गामा इनार छ । सुरक्षाका लागि दुई फलामे ढोकासहित कलात्मक गोलाकार पर्खाल निर्माण गरिएको छ । पर्खालमाथि लहरे फूलका गमला राखिएका छन् ।